चीन Polyurethane रंग निर्माताहरु र आपूर्तिकर्ताहरु - पूर्वी Argon रासायनिक
घर > उत्पादनहरु > तेल आधारित रंग > Polyurethane रंग
Polyurethane रंग निर्माताहरु
Polyurethane रंग, वा Polyurethane urethane रंग, एक रंग हो कि यसको कोटिंग फिल्म मा urethane बन्ड को एक अनुरूप संख्या समावेश गर्दछ।
Polyurethane रंग polyurethane topcoat, polyurethane वार्निश, polyurethane पाक रंग, polyurethane सुन्तला रंग, आदि मा विभाजित गर्न सकिन्छ Polyurethane रंग छिटो सुखाने, राम्रो आसंजन, पानी प्रतिरोध, लगाउने प्रतिरोध, जंग प्रतिरोध, बलियो रंग फिल्म, रसायन र औद्योगिक अपशिष्ट प्रतिरोधी छ ग्यास, राम्रो बिजुली गुण विद्युत गुण छ, रेजिन को एक किसिम संग संगत हुन सक्छ, र सूत्र विभिन्न आवश्यकताहरु र अन्य लाभहरु लाई पूरा गर्न को लागी एक विस्तृत श्रृंखला मा समायोजित गर्न सकिन्छ।
Polyurethane रंग व्यापक रूप बाट woodware, अटोमोबाइल, हवाई जहाज, मशीनरी, बिजुली उपकरण, उपकरण, प्लास्टिक, छाला, कागज, कपडा, पेट्रो रसायन र अन्य पहलुहरु मा प्रयोग गरीन्छ। यो न केवल विभिन्न धातु संरचनाहरु को सतह मा एक विरोधी जंग मध्यवर्ती रंग को रूप मा प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर यो पनि एक उच्च सजावटी र महत्वपूर्ण उत्पादनहरु को सतह मा अत्यधिक सुरक्षात्मक topcoat को रूप मा।
Polyurethane सुन्तला अनाज रंग मुख्य कच्चा माल को रूप मा विशेष राल बाट बनेको एक रंग हो, एक विशेष प्रक्रिया को माध्यम बाट केहि pigments, additives, र पतला संग मिलान।
Polyurethane वार्निश हाइड्रोक्सिल युक्त alkyd राल को मुख्य सामाग्री को रूप मा बनेको छ, केहि निश्चित प्रोसेसिंग विधिहरु को माध्यम बाट विलायक, additives, इलाज एजेन्ट, आदि को एक निश्चित अनुपात संग मिलेर बनेको छ।
Polyurethane पाक रंग पलिएस्टर रंग को एक नयाँ प्रकार हो। उच्च गुणस्तरीय तेल मुक्त alkyd राल र अन्य जैविक रेजिन, गैर विषाक्त pigments, उन्नत टेक्नोलोजी द्वारा परिष्कृत चयन गर्नुहोस्।
Polyurethane topcoat बलियो विरोधी जंग र विरोधी जंग क्षमता संग isocyanate prepolymer र हाइड्रोक्सिल युक्त राल आधार सामग्री को रूप मा तैयार, colorants, जैविक विलायक, additives, आदि जोड्ने संग एक topcoat छ।
चीन मा एक पेशेवर Polyurethane रंग निर्माताहरु र आपूर्तिकर्ताहरु को रूप मा, ईस्ट आर्गन केमिकल अनुकूलित को निर्माण को समर्थन गर्दछ Polyurethane रंग। एकै समयमा, सबै उत्पादनहरु फैशनेबल, उन्नत, टिकाऊ र उत्तम दर्जेको, र CE प्रमाणीकरण छन्। हाम्रा उत्पादनहरु को उच्च गुणस्तर आंशिक रूपमा छ किनकि हामी हाम्रो आफ्नै कारखाना छ र आंशिक रूपले हामी अनुभवी र कुशल कामदारहरु छ। के तपाइँ थोक Polyurethane रंग लाई समर्थन गर्नुहुन्छ? निस्सन्देह, यदि तपाइँ थोक, हामी तपाइँलाई सस्तो मूल्य, छुट र उद्धरण प्रदान गर्न सक्छौं। यसको अतिरिक्त, यो छुट उत्पादनहरु किन्न ठीक छ। यदि तपाइँ हामी संग सहयोग गर्न र उत्पादन किन्न चाहानुहुन्छ, हामी यसलाई कम मूल्य मा बेच्न सक्छौं। जस्तै भनिएको छ: सहयोग एक जीत-जीत हासिल गर्न! हामी तपाइँ संग सहयोग र एकसाथ साझा विकास साकार गर्न को लागी तत्पर छौं।